Tadalafil ntụ ntụ hplc =99% | AASraw tadalafil uzuzu maka sal | AASraw
/blog/Cialis , tadalafil/Ajụjụ 6 jụọ onwe gị n'ihu gị cialis ntụle nyocha
Ihe na 01 / 09 / 2018 by Dr. Patrick Young dere na Cialis, tadalafil.
Ọ dị mkpa ime cialis ntụ ntụ nyocha mgbe ị dị njikere ịntanetị ma ọ bụ na-ewere cialis ntụ ntụ.
Lee ajụjụ isii. Biko gosi na onwe gị.
Q1: ihe cialis ntụ ntụ ?
A na-egosi cialis ntụ ntụ maka ọgwụgwọ nke adịghị arụ erectile. Cialis ntụ ntụ bụ ụdị nke 5 (PDE5) nke phosphodiesterase. Ọ na-arụ ọrụ site n'inyere aka ime ka ọbara na-abanye n'ime oge n'oge mkpali mmekọahụ. Nke a na-enyere gị aka inweta na ịnọgide na-arụ ụlọ.
Q2: Otu esi eji cialis ntụ ntụ dị ka nnyocha cialis ntụ ntụ ?
Jiri Cialis dị ka dọkịta gị gwara gị
Were Cialis ntụ ntụ site na ọnụ ma ọ bụ na-enweghị nri.
Maka iji ya dị mkpa: Were Cialis ma ọ dịkarịa ala 30 nkeji tupu ịlụ nwanyị, dị ka dọkịta gị gwara gị. Cialis nwere ike ịrụ ọrụ ruo 36 awa mgbe ị were ya.
Maka iji kwa ụbọchị: na mgbe niile n'otu oge n'otu ụbọchị.
Gaa na dọkịta gị tupu i rie mkpụrụ osisi vaịn ma ọ bụ ṅụọ mmanya mkpụrụ osisi ka ị na-ewere Cialis ntụ ntụ.
Maka iji mee ihe dị mkpa: Ọ bụrụ na ị na-atụ ụra nke Cialis ntụ ntụ ma ị ka na-achọ inwe mmekọahụ, buru ya ngwa ngwa ị chetara. Nọgide na-ewere ya dịka dọkịta gị gwara gị. Maka ojiji gi kwa ubochi: oburu na ichuta uzo nke Cialis uzuzu, buru ya ngwa ngwa o kwere mee. Ọ bụrụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge maka ọgwụgwọ ọzọ gị, mee ka ụbụrụ a tụfuru ma laghachi azụ n'usoro usoro ịhazi oge gị. Ejikwala 2 dosie ozugbo.
DOSAGE nke cialis ntụ ntụ
Maka Iji Dị Mkpa
Ntụziaka a na-atụ aro maka Cialis ntụ ntụ iji mee ihe dị ka ọ dị mkpa na ọtụtụ ndị ọrịa bụ 10 mg, buru tupu oge elekere anya.
A pụrụ ịmalite iji ọgwụ ahụ na 20 mg ma ọ bụ belata na 5 mg, dabere na nrụpụta nke onye ọ bụla na nkwado ya. Ihe kachasị atụ aro dosing ugboro bụ otu ugboro kwa ụbọchị na ọtụtụ ndị ọrịa.
E gosipụtara Cialis ntụ ntụ iji mee ihe dị mkpa iji melite ọrụ erectile ma e jiri ya tụnyere placebo ruo 36 awa ndị na-esote dosing. Ya mere, mgbe ị na-adụ ndị ọkachamara ọdụ maka iji ezigbo Cialis mee ihe, a ghaghị ichebara nke a echiche.
Maka Otu Ugboro Daily
Ntụziaka a na-atụ aro nke Cialis ntụ ntụ maka otu ugboro a na-eji eme ihe bụ ụbọchị 2.5, were na oge n'otu oge kwa ụbọchị, na-enweghị ihe gbasara usoro oge nke mmekọahụ.
A na-eme ka Cialis ntụ ntụ maka otu ugboro kwa ụbọchị gaa na 5 mg, dabere na nrụpụta nke onye ọ bụla na nkwado ya.
Jụọ onye nlekọta ahụike gị ajụjụ ọ bụla i nwere ike inwe gbasara otu esi eji Cialis ntụ ntụ.
Q3: Mee Ịdọ aka ná ntị of Cialis buru n'uche mgbe ị na-eme nnyocha cialis ntụ ntụ
Q4: Ọhụrụ cialis ntụ ntụ nnyocha: esi mee Tadalafil / Cialis mmiri mmiri?
Dị mfe dịka o nwere ike: Tinye obere gelantin (knifetip) na mmiri oyi (25 ml) ma kpoo mmiri ahụ n'ihe dị ka 80 Celsius C ruo mgbe gelantin niile na-agbaze. Mee ka mmiri dị jụụ ruo mgbe ị na-ekpo ọkụ ma wụsa mmiri dị mkpa maka mmiri n'ime karama (agaghị ezu). Tinye gị. Kpuchaa karama ma kpochapụ hel na ya.Voila. Ọ bụ ya.
Ihe omuma: Gelantin bụ onye emulsifier, nke cialis ntụ ntụ agaghị akwatu ma mee ka emulsion na mmiri. Mmetụta ahụ ga-adịgide adịgide ruo ogologo oge, ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-edozi mgbe ahụ, ọ ga-agwọta ya, ngwa ngwa ọkụ tupu o jiri ya eme ihe n'ezie. Na-echekwa na ime ụlọ.
Q5: Kedu ka ngwa ngwa Cialis ntụsi na-esi arụ ọrụ na ogologo oge ole ọ na-aga nnyocha cialis ntụ ntụ?
Cialis ntụ ntụ na-amalite ịmalite ngwa ngwa karịa ọgwụ ndị ọzọ ED, na mmalite nke ịdị irè n'ime oge 30. Ntuziaka bụ iwe Cialis 30 nkeji tupu oge mmekọahụ, mgbe ọ na - eme, a gwara ndị ọrụ ka ha were 60 minit ole na ole tupu oge mmemme. N'ozuzu, mmetụta nke 24 ikpeazụ na Cialis ruo 36 awa mgbe ọ nwụchara. Eziokwu ahụ bụ na mmetụta dị ogologo oge a bụ isi ahịa maka Cialis, nke mere onwe ya "ngwugwu izu ụka." Ọtụtụ ndị ikom dị ka ha nwere ike ịchọta Cialis Friday ụtụtụ, ma na-enwe mmetụta ụtụtụ Sunday. Ogologo oge nke Cialis na-enye ohere maka inwekwu nkwenye na obere ihe ịkọ banyere oge ị ga-ewe ya.
Q6: Ụzọ abụọ nke ọgwụgwọ a na-enweta na Cialis na-ezigara nnyocha cialis ntụ ntụ
N'adịghị ka ndị asọmpi ya, Cialis ntụ ntụ (171596-29-5) nwere ọgwụgwọ dị iche iche abụọ. Enwere ike iburu ya na ihe dị mkpa, ma ọ bụ na ọ ga-ewere ya n'usoro onu ogugu kwa ụbọchị. Mee ihe dị mkpa, ụdị ọgwụgwọ ahụ bụ 10 mg, ọ bụ ezie na ọ dị na 20 mg na 5 mg doses ma ọ bụrụ na 10 mg agbanweghị ịbụ ezigbo.
Nri, Mmanya na Tadalafil (Cialis) ntụ ntụ
E nweghị n'ezie ihe oriri na Cialis (171596-29-5). Enwere ike iri ya na nri ma ọ bụ na-enweghị. Nanị ịkpachara anya banyere ịgwakọta nri na Cialis bụ na ndị mmadụ kwesịrị izere ịṅụ mmanya ọṅụṅụ mkpụrụ osisi na Cialis. Iwere Cialis na ihe ọṅụṅụ mkpụrụ vaịn nwere ike ime ka ọbara dịkwuo elu ọgwụ ahụ, ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị ka ihe dị mma, ọkwa elu dị elu nke Cialis na-eme ka enwere mmetụta ndị na-adịghị mma.
N'ihi na Cialis nwere ike belata ọbara mgbali, ijikọ ya na mmanya nwere ike ịkọwa mmetụta a. Iburu Cialis na mmanya nwere ike ime ka ohere dizziness, ntutu isi, obi ala, na isi ọwụwa. Jiri nlezianya kpachara anya ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ mmanya mgbe ị na-ewere Cialis, karịsịa ma ọ bụrụ na ị maghị otú ọ ga-esi emetụta gị. Karịsịa, ịda mbà ma ọ bụ ịgha ụgha na-eme ka o yikarịrị ka ị ga-enweta ìhè isi na dizziness.
Tupu ịzụta ma ọ bụ were Tadalafil (Cialis) ntụ ntụ, ọ bụrụ na enwere obi abụọ ọ bụla, biko leba anya na weebụsaịtị maka ajụjụ ndị ọzọ maka nchọpụta cialis aasraw
Tags: cialis ntụ ntụ, tadalafil uzuzu
Stanozolol ntụ ntụ maka bodybuilding: 16 eziokwu ị kwesịrị ịma !!!	Ihe gbasara 5 kachasị elu banyere nchọpụta Cialis